सदाझैं यस वर्ष पनि छलफलको विषय बन्यो दशैं टीकालगत्तै घुम्न कहाँ जाने ? दशैं विदामा हामी केहि साथीहरु मिलेर घुम्न निस्कने गरेको आठ बर्ष भो । उसो त घुम्न रमाउने म व्यक्तिगत र अफिसियल गरी कहिले कता कहिले कता भईनैरहन्छ यद्यपी साथी साथीको एक समूह बनाई वर्षेनि नियमित रुपमा कम्तीमा एक पटक दशैंटीका लगत्तै हिँड्न लागेको भने यो आठौँ वर्ष हो । यसपटक निष्कर्षमा समुद्री सतहबाट ३ हजार २ सय मिटरको उचाइमा रहेको अलौकिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रारा घुम्न जाने निर्णय भयो ।
नियमित रुपमा सँगै हिँड्ने केही साथीहरु भन्दा फरक टिम बन्यो यसपटक † हेटौंडाबाट किरणजी र म थियौं भने नवलपरासी जिल्लाबाट अन्य चार – लक्ष्मीसागर चापागाईं, ईश्वरीसागर चापागाईं, प्रेम गिरी र सुजल गिरी । हामी मोटरसाइकलमा यात्रा गर्न रुचाउँछाँै । रारा यात्राका विषयमा केही अध्ययन र केही त्यहाँ पुगेर आएका साथीहरुसँगको कुराकानीबाट हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ । रारा यात्रा मोटरसाइकलमा सहज छैन । हिँड्नुको विकल्प नहुँदाको अवस्थामा बाहेक मोटरसाइकलमा जस्तो मजा अरुमा नआउने हाम्रो अनुभवले बताउँछ, त्यसैले रोज्यौँ सदाझैं दुई पाङ्ग्रे वाहन मोटरसाइकल । हामीलाई थाहा थियो यात्रा जति चुनौतीपूर्ण हुनेछ त्यति नै हाम्रो लागि रोमाञ्चक पनि † साहसिक त छँदै छ ।
टीकाको पर्सिपल्ट अर्थात कार्तिक ४ गते प्रारम्भ ग¥यौँ यात्रा । गैँडाकोटमा सबै भेटेर करिब १ बजे शुरु गरेको यात्रा त्यस दिन रातको करिब ११ बजे कोहलपुर गएर टु¨ियो । रातको समयमा बाइकको यात्रा ‘अनहेल्दी–अनसेफ’ हुने थाहा हुँदाहँुदै पनि अपरिपक्व निर्णयले हामी कुदी नै रह्याँै ।
लामो दूरीको यात्राको थकानले भोलिपल्टको हाम्रो यात्रा १० बजेबाट शुरु ग¥यौँ । बीच बीचमा चिया नास्ता त छँदै थियो, मनोरम दृश्य देख्नासाथ बाइक रोकेर एकैछिन अलमल हुनु त स्वाभाविक नै थियो । सुर्खेत हँुदै अघि बढेका हामी २५ किलोमिटर जति अगाडि पुगी गुँरासेमा खाना खायौँ । हामी सबैको लागि सुर्खेत नयाँ थियो । नयाँ जिल्ला, नयाँ ठाउँ । खानापछि हामीले हाम्रो गन्तव्य कालिकोटको मान्म बनायौं र बढ्यौं बाइकमा सरर । रातको करिब आठ बजे हामी पुग्यौँ मान्म, कालिकोटको सदरमुकाम । सीमित होटल र बढ्दो आन्तरिक पर्यटन । बासका लागि होटलको समस्या । जसोतसो एक होटलमा हल कोठाको भुईमा सुत्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सफल हुँदा ठुलै युद्ध जितेको आभास भो हामीलाई ।
सीमित ठाउँमा मात्र बाइक बनाउन पाईने र सीमित ठाउँमा नै पेट्रोल पाईने हुँदा त्यसको जोहो गर्दागर्दै र नास्ता खाएर हिँड्दा झण्डै १० बजिसकेको थियो । केही अघि बढेर हाम्रो टोली कालिकोटको पिलीमा रोकियो । चियाको निम्ति रोकिएको हाम्रो टोलीले स्थानीयसँगको छलफलको क्रममा पिली बुझ्ने मौका पायो । यो त्यही ठाउँ थियो जहाँ जनयुद्धको अन्तिम युद्ध भएको थियो जसमा ६२ जना सेना मारिएका थिए भने माओवादी तर्फको मानवीय क्षति भने एकिन भएको थिएन । नाग्मा हुँदै हाम्रो टोली खानापश्चात् अघि बढ्यो । केही बिग्रिएका, भत्किएका बाहेक कालोपत्रे गरिएको सडकको यात्रा सकिएको थियो । नाग्मादेखि हामीलाई १०० कि मि को हाराहारी पुरै कच्ची बाटोको यात्रा तय गर्नु थियो । पूरा यात्रामा यो १०० कि मि बढी नै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । अप्ठ्यारो बाटो त छँदै छ , त्यसका अलावा साधनमा केही समस्या आएमा या आफैंलाई केही भएमा कुनै विकल्प नहुनु । नाग्मामै एक चरण फेरि बाइक देखाइवरि हामी अघि बढ्यौं । हामीसँग नाग्मा हँुदै सिधै अघि बढ्नुका साथै विकल्पमा जुम्ला हुँदै भुलभुलेमा निस्कने मार्ग पनि थियो । केही छोटो भएतापनि बाटो तुलनात्मक रुपमा अझ अप्ठ्यारो भन्ने बुझाइ हाम्रो भएपछि हामीले चलनचल्तीकै बाटो रोज्यौं । मिलेसम्म मुगुकै सल्लेरी, ताल्चा या गमगढी बास बस्न पुग्ने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढ्यौं । भुलभुलेमा रहेको आर्मी चेक पोष्ट ६ः३० सम्ममै कट्नु पर्ने कुराको जानकारी मलाई थियो तद्अनुरुप हामी समयभन्दा २० मिनेट अगावै पुग्न सफल भयौं । त्यहाँ पुग्दै झिसमिसे साँझ परेकाले त्यसपछिको यात्रा अझ कठिन रह्यो । रातको समय, चिसो मौसम, सिरेटो उस्तै । हाम्रा तीन वटा बाइक ५०÷६० मिटरको दूरीमा थिए । हामी बासका निम्ति विकल्प पनि खोज्दैं थियौं । अघि बढ्नुको विकल्प थिएन । रातको समयमा फर्कदै गरेका केही यात्रीहरुलाई रोकेर सोध्यौं, यसबेला किन ? हामीले तय गर्ने भनेको तीनवटै गन्तव्यबाट फर्किएका यात्री हामीले भेट्यौं ।
सबैको एकै जवाफ – बास बस्ने ठाउँ नपाएर । बासको विकल्प खोज्दै रारा छेउमै पुगेर फर्किएकाहरुको कुरा सुनेपछि हामी वरै बासको विकल्प खोज्न लाग्यौं । राराबाट झण्डै १९ कि मि वरै एउटा सानो घरमा बासको निम्ति अनुरोध ग¥यौं र पायौं पनि । समय, ठाउँ, परिस्थिति अनुरुप एडजस्ट हुन जानिसकेका हामीलाई त्यो झुपडी कुनै पाँच तारे होटल भन्दा कम लागेन त्यस बखत । भाले काट्न लगाएर दाउराको जोहो गरी आगो ताप्दै आगोकै उज्यालोमा रमाइलो ग¥यौं र सुत्याँै आफूलाई यसर्थ भाग्यमानी ठान्दै कि – बासको जोहोका निम्ति चिसोमा रातारात भौतारिनु त परेन † चौथो दिन सबेरै निक्लियौं गाँस बासका निम्ति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै । सल्लेरी पुगेर बाइक राखी झण्डै १ घण्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ । धुलो मैलोले बैरागिएका हामी फ्रेस भइवरि नास्ता खाएर उक्लियौं माथि । पैदल मार्ग भनिए तापनि गाडीहरुलाई मान्छे छोड्न र लिनका निम्ति अझ माथि सम्मै छुट दिइएकाले हिँड्नेले हिँडाइको मजा लिन नपाउनु र उत्तिकै गाडीका कारण उडेको धुलोको सामना गर्नुले सकसपूर्ण बनाइदिन्छ पदयात्रा † सबैकुरा बिर्साइदिन्छ जब पुग्छौ हामी रारा । लामो संघर्ष पछि, लामो प्रतीक्षापछिको सफलताको जस्तै आनन्दानुभूति हुन्छ बदलिदो पानीको रंग देखेर । स्वच्छ, शान्त वातावरण र मनोरम दृश्यले स्वर्गीय आनन्दानुभूति गराउँछ । डुङ्गाको मजा लिएर केही समय बिताएपछि फर्कियौं हामी सल्लेरी । फर्कदा घोडसवार भएर फर्कियौं । राजा महाराजा घोड सवार भएको देखिरहेका हामीलाई अर्को भिन्नै अनुभव थियो त्यो । प्रेमजी र ईश्वरीजी ले दोहोरी शैलीमा पानको पात गीत गाउन शुरु गरेपछि हामी सबैले लयमा लय मिलायौँ र गाउँदै झ¥यौँ । हाम्रो गानाले सबैको ध्यानाकर्षण त गरायो नै, सबैले भ्याएसम्म क्यामारामा भिडियो सम्म कैद गरे ।
सल्लेरीमा मार्सी चामलको भात र च्याङ्ग्राको मासु खाएर हामी ताल्चा विमानस्थलको अवलोकनका लागि गयौं । केही वर्ष अघिसम्म ग्रावल रहेको रन वे फोटोमा देखेको थिएँ, सुनेको थिएँ मैले चिनेका पाइलट भाइ साथीबाट । अहिले पिच भएको देख्दा खुशी लाग्यो ।
टोली फर्कियो । फर्कदा भुलभुले हँुदै जुम्ला पुगेर बास बस्ने निर्णय ग¥यौं । बाटो पक्कै झन् कष्टकर छ भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौं तर पछुताउनै पर्ने खालको रहेछ भन्ने चाँहि भगवानको नाम लिदै जसोतसो राति ८ बजे तिर जुम्ला पुगेपछि थाहा भो । जुम्ला पुग्नु आफैमा चुनौती त थियो नै, बासका निम्ति अर्को ठुलो चुनौती खेप्नु प¥यो । जसोतसो २ घण्टा जतिको प्रयासले एउटा कोठाको व्यवस्था गर्न टोली सफल भयो ।
भोलिपल्ट जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर, कृष्ण मन्दिर दर्शन गरेपछि एयरपोर्ट र बजारको एक चक्कर लगाएर जुम्लाको स्याउ र मार्सी चामल किनेर नाग्मा, पिली हुँदै हामी सुर्खेत आइपुग्याँै बास बस्न । भोलिपल्ट सुर्खेतको बुलबुले ताल, काँक्रेबिहार र देउती बज्यै घुमेर अघि बढ्यौं । दाङको भालुवाङ बास बसी भोलिपल्ट साताँै दिनको दिन साँझ सम्ममा सबैले घरसम्मको यात्रा तय ग¥यौं ।
यसरी सुर्खेतबाट दैलेख, कालिकोट, जुम्ला हुँदै मुगुको रारा पुगेका हामी सातौँ दिन घर फर्कियौँ ।
गन्तव्यमै पुग्नका निम्ति मेरो अनुभव र जानकारीका आधारमा राराको यात्रा सबैभन्दा लामो रुट हो । बीच बीचमा हेर्न र घुम्न लायक खास केही नहुनु, घुम्न जाने पर्यटकका निम्ति उचित बासको व्यवस्था नहुनु , साधनले धोका दिएमा या कसैलाई केही भएमा समाधानार्थ विकल्प नहुनु, प्रशस्तै बाल श्रमिक भेटिनु दुःखदकुरा हुन् । यद्यपि बाइक एडभेञ्चर रुचाउनेका लागि अलौकिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रारा एक सही गन्तव्यको रुपमा लिन सकिन्छ । बिना तयारी कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ घोषणा गरेको कुरा भने नकार्न सकिँदैन । यसलाई नेपालकै एक प्रमुख गन्तव्यस्थल बनाउनका लागि भने धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
–हेटौंडा १०, मकवानपुर